Fifehezan sy ny fanasokajiana ny fitaovana fampifangaroana mivaingana - China Shandong QianBaidu
Fifehezan sy ny fanasokajiana ny mivaingana fitaovana fampifangaroana
Fifehezan 'ny simenitra fampifangaroana fototra
Concrete fitaovana fampifangaroana simenitra dia, aggregate, rano, nampiasainy, ary ny fitaovana hafa nampiasainy araka ny notakin'ny simenitra tahan'ny fandrefesana, ary avy eo nahatonga an-mivaingana Mixer napetraka ny fitaovana, matetika fantatra amin'ny anarana hoe mivaingana mampifangaro fototra (rihana). Concrete fitaovana fampifangaroana ny ara-nofo no tena manazava FITAOVANA, fitaovana fitahirizana, fitaovana fandrefesana, mampifangaro fitaovana sy ny fanaraha-maso ny rafitra sy ny singa hafa. Anisan'izany ny fitaovana, aggregate, simenitra, nampiasainy, ny rano, additives sy ny sisa.
Fanasokajiana ny fitaovana fampifangaroana simenitra
(A) ny mivezivezy fanasokajiana
1. Mobile fampifangaroana toerana
Zavatra tsy mampifangaro-peo mandeha matetika amin'ny fitaovana, dia azo afindra amin'ny fotoana rehetra, mivezivezy tsara. Tena mifanaraka sasany vonjimaika na tena finday tetikasa, toy ny lalana, tetezana sy ny sisa.
2. fandravana ny fampifangaroana gara
Zavatra tsy mampifangaro fototra dia nivory avy amin'ny singa lehibe maromaro, dia mety ho tafavory sy disassembled tao anatin'ny fotoana fohy, sy ny famindrana ny toeram-panorenana. Tena ampiasaina amin'ny orinasa sy ny varotra simenitra lehibe sy salantsalany mivaingana fanorenana.
3. Hifantohan'ny fampifangaroana tany
Izany no simenitra lehibe mampifangaro fototra amin'ny famokarana lehibe afaka, indrindra ara-barotra simenitra ampiasaina amin'ny orinasa, lehibe efa voarafitra mialoha fototra sy ny rano conservancy toeram-panorenana.
(B) araka ny fomba famokarana fanasokajiana
Concrete mampifangaro fitaovana araka ny firafitry ny ny teknolojia dia azo zaraina ho dingana sy ny tokan-tena-droa-dingana sokajy roa.
(C) fomba fanasokajiana hafa
Concrete mampifangaro fitaovana ankoatra ny etsy ambony roa karazana fampiasa matetika fomba fanasokajiana, fa koa araka ny na ny fanahafana ny mampifangaro fitaovana sy hametraka rano fampifangaroana ho maina ara-nofo batching toerana sy mando fampifangaroana fiantsonan'ny, araka ampiendrehina ny mitohy sakafo ny fampifangaroana fitaovana mizara ho mitohy fampifangaroana ny toerana sy ny tobin'ny fampifangaroana Gap.